Hetsika amin'ny Oktobra 2019 - The World March
01 / 10 / 2019 Oktobra 2019
Lahateny - Fampisehoana ny World Martsa, Seville
7 Oktobra 2019 @ 17: 00-18: 30 CEST
Lahateny sy famelabelarana ny 2 World March ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandriampahalemana any Seville karakarain'ny Fikambanana Socio Socio Andalusia.
3 hetsika, 8
Tonga tany Tangier, Marôka
Amin'izao andro izao, amin'ny tolakandro, ny fandraisana ny ekipan'ny World March Base any Tangier, Maraoka amin'ny faran'ny Forum Humanistana.
Tonga tany Larache, Marôka
Tonga ao Larache avy any Tangier ny ekipa base.
Coruña - Fihaonambe miaraka amin'ny mpiaro ny zon'olombelona any Kolombia
8 Oktobra 2019 @ 19: 30-21: 00 CEST
Kaonferansa Luz Amparo Vásquez Rojas, mafana fo Kolombiana miaro ny zon'ny tontolo iainana, teratany ary fambolena. Hitondra antsika ho eo akaiky kokoa ilay olana atrehin'ireo vehivavy mpiaro ny zon'olombelona any Amerika Latina
2 hetsika, 9
Tonga any Casablanca, Marôka
Tonga tany Casablanca, Marôka, nandalo an'i Kenitra, avy any Larache.
Forum sinema ho an'ny olon-dehibe, Fiumicello
9 Oktobra 2019 @ 20: 00-22: 00 CEST
Forum sinema ho an'ny olon-dehibe "fortapàsc"
1 hetsika, 10
Tonga tany Marrakech, Marôka
Tonga ao Marrakech avy any Casablanca, Marôka ny ekipa base.
Tonga tany Agadir, Marôka
Tonga any Agadir, avy any Marrakech, Marôka ny ekipa base.
4 hetsika, 13
Tonga any Tan-Tan, Marôka
Ity ekipa Base ity dia tonga any Tan-Tan avy any Agadir, Maraoka.
8ª martsa ho an'ny fandriampahalemana iraisan-tsoa
13 Oktobra 2019 @ 14: 30-17: 00 CEST
Nosokafan'ny Fivavahana ho an'ny fandriampahalemana Sezione Italiana (Gruppo locale di Varese), ny Martsa 8 ho an'ny fandriampahalemana mifandraika amin'izany.
Avy amin'ny efijery mankany amin'ny zava-misy, Fiumicello Villa Vicentina
13 Oktobra 2019 @ 16: 00-18: 00 CEST
Mikasika ny Herinandron'ny Fandriampahalemana 2019, mifanaraka amin'ny 2 World March for Peace and Nonviolence, ity hetsika ity dia tarihina, mikendry ireo ankizy hatramin'ny 9 ka hatramin'ny 13 taona. Mandraisa anjara amin'ilay horonantsary "La mia vita da zucchina", hiresahana ny zon'olombelona. Natsangan'i Eleonora Degrassi. SeSedeSdeSsede
4 hetsika, 14
Tonga tany Aaiún, Marôka
14 Oktobra 2019 @ 08: 00 CEST
Tonga ao Aaiún, avy any Tan-tan, Marôka, ny ekipa Base.
Tonga any Gran Canaria avy ao Laayoune, Marôka
14 Oktobra 2019 @ 09: 00 CET
Ny ekipa base dia nifindra tany El Aaiún, Marôka mankany Gran Canaria.
14 Oktobra 2019 @ 19: 00 CET
Ahoana ny fomba hivoarana amin'ny fandriampahalemana ao anatin'ny tontolo mifanohitra? Resaka ao amin'ny Klub de Provincia de Gran Canaria avy amin'i Jaime Rojas Hernandez, PhD amin'ny Siansa Ara-batana. Fikambanana Kanaria momba ny fampandrosoana ara-pahasalamana amin'ny alàlan'ny fikarakarana.
2 hetsika, 15
Tonga eto amin'ny Nosy Santa Cruz de Tenerife
Tonga any amin'ny nosy Tenerife, Espagne ny ekipan'ny Base.
Tetikasa "Fanombohana ny fiafaran'ny fitaovam-piadiana niokleary", La Laguna
15 Oktobra 2019 @ 19: 00-21: 00 CEST
Fanatombohana ny fiandohan'ny fitaovam-piadiana niokleary sy ny adihevitra manaraka ao amin'ny Auditorium amin'ny oniversite La Laguna.
4 hetsika, 16
Tongasoa eto amin'ny Base Team, La Laguna
16 Oktobra 2019 @ 09: 00-10: 30 CET
Tongasoa eto amin'ny ekipa fototry ny 2 World martsa ao amin'ny efitranon'ny oniversite La Laguna, nataon'i Rector Rosa Mª Aguilar Chimea. Manoloana ity hetsika ity dia nasaina mba hifaneraserany ny fandraisana an-tanana ny Ben'ny tanànan'i La Laguna, Atoa Luis Yeray Gutiérrez Pérez, fa
Miakatra ny tampon'I Teide any Santa Cruz de Tenerife
16 Oktobra 2019 @ 11: 00-21: 00 CET
Taorian ny fandraisana any La Laguna, mankanesa any an-tampon'ny Teide hampiakatra ny saina ny 2 World martsa.
Tongasoa eto amin'ny Tontolo faha-2 World March, Tenerife
16 Oktobra 2019 @ 17: 00-20: 00 CEST
Fiaraha-tongasoa eto amin'ny 2 World martsa. 17: 00: diabe firaisan-kina manomboka amin'ny Plaza Martínez mankany Plaza Europa 17: 30: Fiarahabaina mandray an-tanana miaraka amin'ny ben'ny tanàna ao Puerto de la Cruz ary olo-malaza hafa. 18: 00: Hetsika mozika, dihy ary hetsika mifampitaona
3 hetsika, 17
Tonga any Lanzarote, Nosy Canary
17 Oktobra 2019 @ 08: 00-17: 00 CET
Tonga ao Lanzarote avy any Santa Cruz de Tenerife ny ekipa base.
Tetikasa «Fanombohana ny fiafarana fitaovam-piadiana niokleary», Ciempozuelos
17 Oktobra 2019 @ 18: 30-20: 00 CEST
Tetikasa «Fanombohana ny fiafarana fitaovam-piadiana niokleary», Ciempozuelos, trano fitahirizam-bokatra ao Ciempozuelos.
Ny fijerena ny Forum fanadihadiana
17 Oktobra 2019 @ 19: 00-21: 00 CET
Ny fijerena sy ny antontan-taratasy manaraka an'ny Forum Ny fanombohan'ny fitaovam-piadiana niokleary.
4 hetsika, 18
Fihaonambe mpanao gazety, Salta
18 Oktobra 2019 @ 08: 00-17: 00 CMT
Fiantohana ao amin'ny Institut Training Training, El Bolsón
18 Oktobra 2019 @ 17: 00-18: 30 CEST
Tetikasa ny "fanombohan'ny fiafaran'ny fitaovam-piadiana niokleary" ao amin'ny Institut tohin'ny fanohizan'ny mpampianatra fiofanana. Panel no ahitana an'i Dr. Raul Prytula, APDH ary mpanao gazety tontolo iainana Roberto Corral ao amin'ny FM ORIGEN
Fanalahidy amin'ny hetsika tsy misy herisetra
18 Oktobra 2019 @ 18: 00-20: 00 CEST
Ny Kelly, manao atrikasa momba ny "Ireo lakilen'ny hetsika tsy misy setra"
3 hetsika, 19
Avy any Gran Canaria ka Nouakchott, Maoritania
Ny Base Team dia mandeha avy any Gran Canaria mankany Nouakchott, tanànan'i Maoritania izay hisy ny hetsika maro samihafa.
Ny fanadiovana ny ranomasina ary miaina miaraka
Ny fanadiovana ny morontsiraka sy ny ranomasina any amin'ny morontsiraka Reducto (Arrecife) ary ny "sakafo Coexistence".
19 Oktobra 2019 @ 12: 00-12: 30 SMT
Diabe ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fandeferana, Comparsa La Gandhi. Pasacalle, Santiago, ChilePasacalle, Santiago, ChilePasacalle, Santiago, Chile
3 hetsika, 20
Fivoriana ara-kolotsaina ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandeferana, Salta
Fivoriana ara-kolontsaina faharoa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandeferana ao amin'ny faritr'i San Martin Park Amphitheater.
Marathon mamaky soratra NoViolencia
20 Oktobra 2019 @ 08: 00-17: 00 CEST
Famakiana soratra marika Tsy herisetra, nataon'i Oxfam Intermon sy Solidaridade galega. Ao amin'ny A Coruña, amin'ny toerana sy fotoana hamaritana azy.
Fanantenan'ny fandriampahalemana, Ostuni
20 Oktobra 2019 @ 10: 30-12: 30 CEST
Nandritra ny "Hortus Ostuni" dia nahitantsika ny volan'ny Firenena Mikambana tamin'ny volana martsa faharoa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fanarahan-dalàna eny Atsinanana.
Tonga tany Nouakchott, Maoritania
21 Oktobra 2019 @ 09: 30-20: 00 GMT
Tonga any Nouakchott, Maoritania, ny ekipa Base, izay handraisan-dRamatoa Fatimetou MINT ABDEL MALICK, Filohan'ny vondron-tanànan'ny Nouakchott.
Tonga any Rosso avy any Nouakchott
23 Oktobra 2019 @ 09: 00 GMT
Tonga ao Rosso avy any Nouakchott ny ekipa Base.
Fihaonana sy fifanakalozana, Nouakchott
23 Oktobra 2019 @ 16: 30-19: 00 GMT
2 World martsa ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fanarahan-dalàna, fivoriana sy fifanakalozana
1 hetsika, 24
2 hetsika, 25
25 Oktobra 2019 @ 19: 00-21: 00 CEST
25 Oktobra 2019 @ 19: 30-21: 00 CEST
26 Oktobra 2019 @ 09: 00-14: 00 CET
26 Oktobra 2019 @ 09: 00 GMT
5 hetsika, 27
Fialam-boly ho an'ny fandriampahalemana sy fiarovana ny Reniranon'ny Fotsy, Namballe, Peroa
27 Oktobra 2019 @ 10: 00-11: 30 CET
Fialam-boly ho an'ny fandriampahalemana sy fiarovana ny Reniranon'ny Fotsy, avy amin'ny paroasy S. Ignacio de Loyola ka hatramin'ny havoana El Huabo.
27 Oktobra 2019 @ 10: 00-14: 00 CET
27 Oktobra 2019 @ 13: 00-18: 00 CET
28 Oktobra 2019 @ 09: 00-09: 30 GMT
2 hetsika, 30
30 Oktobra 2019 @ 10: 00-10: 30 GMT
Tonga eo amin'ny seranan-tsambo any Marseille
30 Oktobra 2019 @ 12: 00 CET
Ho tonga any Marseille ny "The Peace of Peace" Bamboo, ao amin'ny Société Nautique de Marseille, Port taloha, Muelle Nueva Costa, manoloana ny No. 20.
2 hetsika, 31
Tonga tany Bandoulou Touculeur, Senegal
31 Oktobra 2019 @ 09: 00-09: 30 GMT
Tonga eo amin'ny Bandoulou Touculeur ny ekipa World March Base.
Hariva "Mihira ho an'ny rehetra", Marseille
31 Oktobra 2019 @ 19: 00-23: 00 CET
Aorian'ity hira "Hira ho an'ny rehetra" ity dia hifandimby isika: Famelabelarana ny tetikasa "Mediterane, Mar de Paz" sy fifanakalozana. "Albergue Español" dia mitondra sakafo sy zava-pisotro hizara amin'ny andro fety, miaraka amin'ny hiran'izy ireo, ny mozika, ny lahatsoratra, ny dihy, sns ... Izahay dia mandray ny sambo "fampielezan-kevitry ny mediteran'ny" Mediterranean, Mar de Paz "ao anatin'ny tontolon'ny 2ª World March
Nosy Gorea any Senegal
Ny fizotry ny ekipa fototra avy amin'ny nosy Gorea (nosy andevo).
2 hetsika, 2
MPANOMPOANA HO AN-TOKONY SY FIVORIANA, A Coruña
2 Novambra 2019 @ 08: 00 CET
# lola.saavedra.pintora #amarchacoruna #WorldMarch Coruña artista plastika Lola Saavedra niara-niasa tamin'ny kanto tamin'ny «March World World for Peace and Nonviolence» izay naneho ny lanjan'ny Fihavanana, Firaisan-kina ary Nonviolence. Azonao atao ny mankafy ny sanganasa naseho tao amin'ny galeriany "SPAZO" hatramin'ny faran'ny Janoary 2 tany Avda.
Forum Humanista, any Pikine, Senegal
2 Novambra 2019 @ 18: 00-20: 00 GMT
Fanatanterahana Forum Humanistana, ao Pikine, Senegaly.
2 hetsika, 3
Fanadiovana fotsy Caletón - Lanzarote
3 Novambra 2019 @ 10: 00-14: 00 CET
Ahoana ny fahasalamanao amin'ny Halloween? Raha te-hampita izany amin'ny tahotra sy manaja ny razanao ianao, tongava anio alahady, hikarakara, hanadio miaraka amin'ny orinasa tsara, ny Pachamama (ny tranonao, ny tranonay) .. andao mankalazà HallowClean! ;) Caletón Blanco, Lanzarote.
Mihirà fihavanana sy tsy fandeferana, Waterloo, Ontario
3 Novambra 2019 @ 14: 00-16: 00 est
Ampisehoy an'izao tontolo izao fa ny Faritra Waterloo dia manohana tontolo mitombo, manaja, fahamarinana, fitoviana, fangorahana .... Fanolorana ny fandikana ny amboarampeo teo an-toerana sy ny mariky ny fiadanan'olombelona 13º isan-taona.